Igosa lokugqiba izifundo! Abafundi besikolo esiphakamileyo bayalinda ngokuthuthumela ngalolo suku. Amantombazana ajikeleza ngokuthenga iingubo, abafana bafuna i-suit enhle. Ukuba kunye nabantwana ngokusemgangathweni yonke into iyicacile kwaye icacile, ngoko amantombazana awanalo lula. Emva koko, kwiintlobo ezininzi zeendlela, kubalulekile ukuba ukhethe ngqo ingubo egxininisa zonke iimpawu, kwaye apho intombazana iya kukhanyela kwiqela lokugqiba. Kuze kube yimhla, umyili uSherry Hill uye waba yiyona nto imfuneko kwimfesane. Emva koko, nguyena umyili oye wakhupha iqoqo leempahla ezintle kakhulu ukuhlwa ngokugqiba u-2016. Naliphi na intombazana ekhetha ingubo ekuqokeleleni kwakhe iya kuba yinto engathintekiyo ekugqibeleni, kwaye yonke ingqalelo iya kuqondiswa kuye kuphela. Makhe siqwalasele izinto ezahlukeneyo zokugqoka.
Singaxelela ukuba esi sisisombululo esihle kwi-prom. Izigqoko zesitayela ze-Mermaid zicwangcise ngokucacileyo umlinganiselo wakho. Iimodeli ezikhethekileyo kunye nomsila wangaphambili ziya kutsala abanye abantu. Umkhwa omtsha walo nyaka unyaka oluhlaza kunye neefriji ezihlukeneyo, iintsiba kunye nemisonto.
Kwakhona, xa ukhetha iingubo ezide, qaphela ukukhanya, ukuhamba kwemifanekiso, umzekelo, khetha i-satin, i-lace, i-silk, njl njl. Ukuba le nto intombazana inesimo sengqungquthela okanye i-tummy encinci, ngoko kwimeko kufuneka ukhethe ingubo kwi-style yaseBukhosi, yinto enqabileyo kwaye iya kunceda ukufihla zonke iingxaki.
Ukuze uhanjiswe ingqalelo kumathanga apheleleyo, kuya kukwanela ukuba ufumane ingubo enhle kunye nesitimela eside ukuhlwa, kuyafuneka ukuba amahlombe nentamo zivulekele. Kwakhona kweli xesha aliyi kulahleka ukuthanda kwabo kunye nokugqoka ngendlela yamaGrike. Ngo-2016, ezi zigqoke zizaliswa ngokuncenga kwaye zihlotshiswe ngobubele ngeentlobo ezahlukeneyo kunye neentsimbi. Ukuba awuyithandi ingubo ye-laconic monochrome, ngoko unokuyifakela ngebhanti elityebileyo, elinekhenkco ezimnandi.
Amantombazana amancinane aneemilenze ezincinci aya kukwazi ukuzibonakalisa kwisambatho se-cocktail kwi-graduation party ngo-2016. Indlela ekhoyo yeli xesha i-silhouette elula ngokusondeza, ngaphandle kwezinto ezingakumbi zokuzihombisa. Into ebaluleke kakhulu yeengubo ezinjalo ziinqununu, zi-shades ezihle kunye nezinto ezibiza kakhulu.
Funda kwi-AllWomens: Iingubo ezimfutshane zokugqiba iimviwo, i-topical ngo-2015
Kakade, musa ukulibala malunga neengubo ezimnyama. Ngamantombazana onobuhlungu kunye nokuzithemba-esi sisisombululo esilungileyo esiza kuziphakamisa ngokwakho. Kodwa emva kwakho konke, kwi-prom, awufuni nje ukuza kwaye uhlale emthunzini ngengubo emnyama, kodwa ufuna ukukhanyela ngamandla kunye neyona nto ibaluleke kakhulu. Ngako oko, abaninzi abaqulunqi bavelisa iqoqo leengubo nge-skirt-tulip okanye ngesimo sepencil skirt, ngelixa konke oku kuhlotshiswe ngeadayimani neentsimbi ezihlukahlukeneyo. Ukugqoka ingubo enjalo, ngokuqinisekileyo uya kukhanya kwaye ukhange umdla.
Izambatho kunye neengubo ezihle kakhulu kunye ne-corset bodice kunye namacangca okanye ngaphandle kuya kukhangeleka. Kulo mbazana intombazana iba njengomphathi. Iingubo ze-Cocktail ezinemibala emnandi kwimibhobho yokulala ziza kugxininisa ukunambitha kwakho kwaye zivelise ebomini bakho ubuncinane kunye nolunye uhlobo lobubele.
Vumelana ukuba iintlobo zezitayela ziyamangalisa! Ukuba kukho umnqweno, ngoko nayiphi na intombazana iya kukwazi ukuzikhethela iingubo ze-chic kwiqela lokugqwesa, eliya kuhlala kwindawo yakho. Emva kwakho konke, kwisidlo esikhulu esilutsha kufuneka uvele uphinde ukhangele umzobo.
Indlela yokubukeka ibaluleke kakhulu ngebhajethi ethobekileyo: 4 imithetho ye "ward" ikhabethe
Ukutshwenyeka nokukrakra: imifanekiso engabonakaliyo ukusuka ekupheleni kwebusika ibonisa u-2015-2016
I-fashionable summer e-2013: ezili-10 izinto ezisefashini zehlobo
Indlela yokujongana neenwele ezincinci
Ukulibala kubantu abangakhulelwe
Yintoni ekukhethileyo ukuba uyikhethe?
Indlela yokwenza ifowuni iphelelwe iphepha
U-Dzhigurda no-Aneless baphumelele kwinkundla yefa ngenxa ye-Navka
Imbali yokukhonza itafile yokutya
Unokuyithatha njani ukunqwenela ukutya okunobunzima kunye nezindlela zabantu?
Ubisi kunye neebhola zeebhola
Izicathulo zobugcisa bexesha elizayo kwiveki yeMfashini eNew York
Umbala onemibala ngaphakathi
Izindlela eziphumelelayo zokukrazula iimfumba ezinxibe kwiingubo